Borrasca Gloria: njirimara, mbido na nsonazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ajọ ifufe kachasị dakwasịrị Spain na 2020. Ọ bụ maka oké mmiri ozuzo Gloria. Ọ bụ nke mbụ nke isi mmiri ozuzo agbakwunyere n'afọ gara aga. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ya ji echetara anyị DANA nke mere na Septemba 2019. Ogologo mmebi nke oke mmiri ozuzo a, tinyere ifufe, snow, mmiri ozuzo na oke ifufe emeela ka oké ifufe Gloria bụrụ otu n'ime ihe kachasị njọ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na nsonazụ nke oke mmiri ozuzo Gloria.
1 Mmalite na ihe kpatara oke mmiri ozuzo Gloria
2 Ihe si na oké ifufe Gloria
3 Omumu ihe puru iche
Mmalite na ihe kpatara oke mmiri ozuzo Gloria
Ọ bụ oke mmiri ozuzo nke nwere oke njirimara ihu igwe n'ihi ifufe siri ike, mmiri ozuzo, snow na ebili mmiri siri ike ọ kpatara. Ndị ọkachamara gbasara ihu igwe buru amụma na oke mmiri ozuzo a ga-agbaji ụfọdụ ndekọ na ụfọdụ ihe ndị dị mkpa gbasara mgbanwe ikuku dị na mmiri mụọ. Ọ bụ ezie na a na-ewere ya dị ka obere ifufe, ọ na-eme ihe ike.
Ọ bụ ajọ ifufe nke na-ejikọ ọnụ nke oke ihe dị iche iche site na njikọta nke ikuku oyi na ọkwa niile nke troposphere. Anyi na-echeta na troposphere bu nke kachasi oyibo nke ikuku nke dikwa ihe dika kilomita iri too ma na-ebido n’elu uwa. Ọ bụ n'akụkụ a nke ikuku nke ụwa ka ihe omume ihu igwe na-eme. Njikọ nke ikuku oyi na ọkwa niile nke troposphere na iru mmiri site na Mediterenian na-eme ka snowfalls ahụ dị oke egwu na ala elu. Oké ifufe a eguzopụtakwala n'ihi oké ifufe mmiri ụgbọ mmiri na mpaghara Mediterenian nke peninshula na agwaetiti Balearic.
Iji mara nke ọma oke ikuku Gloria anyi aghaghi ibido site na ikuku oyi nke emeputara ya. Igwe a nke ikuku oyi dị elu dị iche iche na-emegide anticyclone nke British Isles, na -emepụta ikuku dị n'etiti ha. Abụọ ndị a na-aga esonyere ya na mgbanwe mgbanwe mberede na ikuku dị oyi Ha si n’ebe ugwu mpaghara kọntinent ahụ. Ike nke ikuku na ihe dị iche na nrụgide na-ebute mmalite nke oké ifufe na nnukwu snowfalls, ọbụlagodi na mgbago dị ala.
Ihe kachasị dị mma bụ ụdị ụdị ebili mmiri a na-ahụkarị n'oge oyi, mana ihe pụrụ iche n'ọnọdụ a bụ na ọ na-eme ihe ike. Ihu ọma ọ bụ n'ihi oke anticyclone na ọbụna oke ikuku oyi siri ike. Ihe omume abụọ a na-akwalite ihu igwe nke na-akwado ihe ndị kachasị emetụta na ọkwa ihu igwe.
Ihe si na oké ifufe Gloria
Ọ malitere na Septemba 2019. A hụrụ oké ifufe izizi mbụ na DANA nke afọ 2016. Amụma maka ọdịnihu bụ na ihe ndị a gbasara ihu igwe ga-adịwanye ike. Okwesighi ịbụ n'ihi mmụba ka ukwuu na ugboro ole, mana kama ike. N'ihi mmetụta na-adịghị mma nke mgbanwe ihu igwe na mbara ụwa, ụdị ọnọdụ ihu igwe dị oke nwere ike ibute n'ike na-arịwanye elu.
Ihe ngosi meteorology bidoro iju mmiri na mgbasa ozi niile ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ọnwụ na mpaghara ahụ yana ọtụtụ narị puku euro na mbibi na mmerụ ahụ. Ọ bụ mmebi kpatara na ụlọ ahịa na obodo, na mgbakwunye na okporo ụzọ na akụrụngwa nke kacha ju anya.
N’ibibi ọtụtụ mbibi ndị ka njọ n’oge ọ bụla, ndị mmadụ na-eche ma ihe omume igwe a nwere ike imebiwanye ihe. Anyị amaghị ma anyị dị njikere ịnagide mmebi ndị a nwere ike ibute oke ihu igwe na-eso. Ma nke ahụ bụ bụ ihe omume ihu igwe abụọ siri ike na ọnwa 6. Enwere otutu data banyere otu ugboro nke oke ihu igwe ga-esi dị iche n'ihi mgbanwe ihu igwe. Ndị ọkachamara na-echekarị banyere ụlọ na ihe owuwu kacha nso n'ụsọ osimiri n'ihi ụjọ nke ịrị elu oke osimiri. Ọ bụkwa na ihe ndị a niile kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-eme atụmatụ ókèala ahụ.
Ọ bụrụ na obodo akwadebebeghị maka ụdị ihe ahụ, mmebi ya nwere ike buru oke njọ ma bụrụ nke a na-apụghị izere ezere kpamkpam. Ihe data na-egosi na ajọ ifufe nwere ike ịda n'afọ ndị na-abịa. Ma mara obere, ma ọ pere mpe, anyị nwere oke mmiri ozuzo Gloria. Ọ bụ ezie na ọ bụ obere ifufe, ọ mebiri ụfọdụ ihe a na-atụghị anya ya. DANA gosipụtara ụfọdụ ihe omume ndị nwere ike ịkpata ọdachi.
Omumu ihe puru iche
Ekwesiri iburu n'uche na aghaghi inwe ihe omumu nke metutara mgbanwe nke mgbanwe ihu igwe n'ọdịnihu. Onye obula Ọnọdụ ihu igwe ndị a dị egwu na-eme na oge ụfọdụ n'akụkọ ihe mere eme. Agbanyeghị, ị naghị adị njikere oge niile maka nsonaazụ ya. Expertsfọdụ ndị ọkachamara na-ekwu na ikpe ọmụma nke adịghị njikere n'ihi ncheta ihu igwe dị mkpụmkpụ anyị nwere. Ikwesiri ima na ihe omuma banyere ihu igwe malitere na 1800 gaa n'ihu ma odighi oke akuko ihu igwe.
Enweghị data nwere ike ịkpata nsogbu n'ọdịnihu. Ma ọ bụ nke ahụ, anyị ga-ekwusi ike na ịmụrụ nke ọma ihe omume ndị dị adị dị adị. Ihe na-ewu ewu bụ na ha na-akawanye njọ ma nwekwaa ike imebi ọtụtụ ihe. N'iburu nke a, obodo na obodo ga-enwerịrị atụmatụ ịnwekwa mmebi ka ihe omume ihu igwe ndị a niile belata mbibi.
Mgbanwe ihu igwe na-amalite site na ịrị elu na nkezi okpomọkụ nke ụwa dum. Ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ gbanwere, ọ na-agbanwe ike niile nke ikuku. Dika okpomoku di na mbara igwe, ikuku gas na-achikota kwa ubochi. Ndị mgbanwe a niile, mee ka ihu igwe dị iche na mgbanwe nwayọ nwayọ, ma ngwa ngwa na ngwa ngwa. Ọ bụrụ na anyị akwụsịghị mmetụta nke mgbanwe ihu igwe, ọnọdụ ahụ ga-agbanwe nke ukwuu. N'agbanyeghị ole teknụzụ mmadụ nwere, mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-eme n'ụzọ dị ọsọ ọsọ na nke a na-akọwaghị.
Ya mere, ọ dị mkpa iji chebe onwe gị pụọ na oké ifufe ndị a nwere ike ịnwe anyị. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oké ifufe Gloria na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Squall Gloria